UHerzlich Willkommen on Izandla - yeka ukuhlukunyezwa kwezingane
Sizibophezele ekuvikeleni nasekuvikeleni ekuhlukunyezweni ngokocansi ezinganeni.
Yiba yingxenye yeqembu
Siyajabula ngawo wonke umuntu osisekelayo futhi ofuna ukuvikela izingane ngokuvikela.
Ingobo yethu yomlando iqukethe izindatshana zamaphephandaba ezihlaziyiwe ezingaphezu kuka-5000 ezikhuluma ngodlame lwezocansi olubhekiswe ezinganeni.
Nikela manje ngesizathu esihle!
Yonke iminikelo isiza ukufinyelela kubantu abaningi futhi isize izingane eziningi.
Izingane kanye nabantu abadala kufanele babone izimpawu zokuhlukunyezwa ngokocansi kanye nabantu abahlukumeza izingane, abanesihluku nabanobulili obufanele ngesikhathi esifanele. Sifuna ukufaka isandla kulokhu ngokusebenzisa imfundo nokuvikela umsebenzi.
Iphumelele ngoJanuwari 2021
Abaxhasi basisiza nsuku zonke
Sizibophezele ekuvikeleni izingane iminyaka eminingana
Sisebenzela incwadi yezingane ezineminyaka engu-3-7 ukuzivikela odlameni locansi. Incwadi izokwenza ukuthi ukuvimbela kube lula ezinganeni, kubazali, kodwa nakothisha nakubo bonke abantu abasebenza nezingane nsuku zonke.
Inhlangano i "Hands Away - Stop Child Abuse" izimisele ngokwenza le ncwadi itholakale mahhala ezindaweni zokunakekela izingane, ezikoleni kanye nakubazali.
Ukuze sifinyelele ezinkulisa ezingama-56 nasezikhungweni zokunakekela izingane eJalimane, eziyi-000 eSwitzerland nezingu-15 000 e-Austria ezinezingane ezingaphezu kwesigidi, sidinga ukwesekwa kwezezimali ezindlekweni zokuphrinta nokusabalalisa. Emazweni akhuluma isiJalimane kunezikole ezinga-10 zamabanga aphansi nezamabanga aphansi ezinabafundi abangaba ngu-000 ebangeni lokuqala, nabo abadinga ukufundiswa.
Kuwebhusayithi yethu ungathola eminye imininingwane mayelana nenhlangano yethu kanye nakuyo www.ngilele.com okuvelile kokuqala kwephrojekthi yencwadi.
Ngiyabonga ngoxhaso lwakho.
IBhodi labaPhathi beNhlangano, uBaba kanye neSakhamuzi,
Akusebenzi ngaphandle kwakho!
Ama-95% ayo yonke iminikelo iya ngqo ezinganeni
Umnikelo wakho wokuvikela izingane
Yonke iminikelo iya ngqo ekuvinjelweni kodlame lwezocansi
Kukhuliswe u- $ 15,000
Umgomo $ 150,000
Nanamuhla abantu abaningi babheka ngenye indlela uma kukhulunywa ngalesi sihloko esesabekayo futhi ngenxa yalokho.
Ngomsebenzi wethu sithanda ukufaka isandla eqinisweni lokuthi hhayi izingane kuphela kepha nabantu abadala bangazibona izimpawu zokuhlukunyezwa ngokocansi kanye nabantu abahlukumeza izingane, abenzi bokuhlukumeza kanye nabathanda ucansi ngesikhathi esifanele futhi basabele ngokufanele. Kumele banikezwe amandla okukhuluma ngakho (kepha bangalokothi bakhulume nomenzi wobubi uqobo, ngoba lokho kungamxwayisa).
Kumele kucace ukuthi ubulungiswa bomlindelo akuyona inketho. Yize kunjalo, wonke umuntu kufanele azi ukuthi bahambisana noma bajeziswa uma kunolwazi lokuhlukumeza, lokhu kodwa angabikwa kusiphathimandla sokuvikela izingane noma emaphoyiseni wird.
KWENZEKA KONKE EMHLABENI WAKHO WOKUXHUMANA
Newebhusayithi Hands Off sikhombisa ubukhulu balesi sihloko kuwo wonke umasipala noma idolobha eJalimane, e-Austria, eSwitzerland nasemhlabeni jikelele.
Uchungechunge lwefilimu "Ushukela wokusebenza", Ngomlingisi omkhulu uNadja Uhl noma ifilimu"Iphathi lokuzingela"Zimelele kahle izinselelo. Ngeshwa, lowo owayengungqongqoshe wezangaphakathi waseJalimane, uThomas de Maizière, unemibhalo"Ixhaphozi laseSaxon”Izosuswa kuyo yonke imitapo yolwazi ye-ARD.
Le filimu ikhonjiswe ngo-20: 15 ebusuku engxoxweni elandelayo yephaneli USandra Maischberger kuxoxwe ngokuningiliziwe. UWilhelm Röhrig, we-UBSKM, uthe naye uyazi ngokubulawa kwezingane.
IZINOMBOLO, IDATHA, AMAQINISO
IBHIZINISI LEBHOLA LEBHILIYONI
Izingane ezingaphezu kwezigidi ezi-3 njengamanje zihlala ekuthunjweni (inani lamacala angabikwanga kungenzeka liphakeme kakhulu) Imboni enikeza izithombe zokuhlukumeza zezingane namavidiyo ahambelana nayo $ 30 billion (inani lamacala angathumelwanga kufanele futhi abe ngaphezulu kakhulu lapha) kufanele likhishwe.
KWENZEKA YONKE INDAWO - HHAYI ENDAWENI YAMI!
Abantu abaningi basakukholwa lokhu. Kepha izinombolo zikhuluma ulimi oluhlukile: Ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi kuphakathi kwethu. Ingxenye engadingeki yomphakathi wethu esikalini eyenza ingakhulumi futhi ithukuthele - futhi kufanele isikhuthaze ukuthi senze.
EJalimane kukhona ngokusemthethweni mayelana Izikhangiso eziyi-15,000 zokuhlukunyezwa kwezingane, nokho, inani lamacala angabikwanga liphakeme kakhulu. Izilinganiso ze-WHO ziphakamisa ukuthi kunjalo cishe isigidi esisodwa abathintekayo amantombazane nabafana eJalimane, uma omunye 18 million Izingane kanye nabantu abasha eYurophu.
Hlala kuwo wonke amakilasi ezikole eJalimane 1-2 izinganeabathintekayo ekuhlukunyezweni ngokocansi.
Mayelana Amacala ayi-9 kwayi-10 lokuhlukunyezwa kwezingane kuhlala kungabonakali.
U-80-90% wabenzi bobubi owesilisa, 10-20% owesifazane.
IZINHLANGANO ZOKUVIKELA IZINGANE
Ukwenza lokhu, sisebenzisana nezinhlangano ezinjenge Thorn.org, ezazisungulwe ngokuhlanganyela nguDemi Moore no-Ashton Kutcher noma Ukusebenza Ngaphansi Komzila Wesitimela WETHULA nguTim Ballard, esivele ikhulule izingane ezingaphezu kwe-1300 ekuthunjweni nakwezinye izinhlangano zokuvikela izingane ekhaya nakwamanye amazwe.
Kuyisidingo sethu futhi ukuthi umthetho wokulinganiselwa ususwe ngokuphindela emuva. WONKE OWESIFAZANE NOWESILISA owake wahlukunyezwa esemncane kufanele abe nethuba lokubika lowo amhlukumezayo.
Wonke amacala ezithombe zokuhlukumeza kufanele abikwe kwi-Interpol, i-BKA noma ezinye iziphathimandla futhi aphathwe yizo, manje ezenziwa ngaphansi kwamacala ayi-10%. Ngenxa yalokhu, i- Imithetho yokugcinwa kwedatha iguqulwa ngokushesha okukhulu, Okwani inqubomgomo iyabizwa. Okufanayo kusebenza emiphumeleni yezomthetho. ESwitzerland, kusengabekwa inhlawulo noma isigwebo esilengisiwe ngokutholakala nezithombe zokuhlukumeza izingane. EJalimane, umuntu oba ezitolo kungenzeka ajeziswe kanzima ukwedlula umhlukumezi.
EPoland kwaphoqelelwa ukuthathwa kwamakhemikhali okuphoqelekile. Yize lokhu kubonakala ngokweqile, okungenani ngaphezulu kwama-50% wabo bonke abenzi bobubi ababuyayo. Lapha futhi, osopolitiki bacelwa ukuthi bathathe izinyathelo ezifanele zokuphoqa ngesikhathi bevalelwe noma belashwa ukuze abenzi bokubi bathole ukunakekelwa okufanele ngokwengqondo. Yindaba engapheli edinga ukumiswa nge-ASAP!
Ukuvimbela kungenye yezinto ezikhathaza kakhulu. Siyakweseka ukuhlelwa kwemidlalo ezinkulisa nasezikoleni ezikhombisa izingane ukuthi imizimba yazo ingeyabo kuphela.
Sisebenza emhlabeni wonke "I-Amber Alert“Ukuze, njengaseMelika, kubikwe wonke amacala okuthumba. Lona ngumyalezo we-alamu othomathikhi nomyalezo we-alamu we-siren okhonjiswa kungakapheli imizuzu embalwa kuwo wonke amafoni weselula abo bonke abantu abangaphakathi kwendawo ethile yesiza sokuthumba. Lokhu kuvela nezici zengane kanye nencazelo nemininingwane yomthumbi (isb. Ipuleti lelayisense).
Ngabameli abakhethekile kanye nezinhlangano ezibalulwe ngenhla, sisiza ngenkuthalo ukuvikela izingane ezisengozini kubenzi bokubi. Ngaphezu kwalokho, sibashushisa ngokwedlulele abenzi bokubi ukuze bathole isijeziso esifanele futhi izisulu zithole ubulungiswa.
Ama-95% weminikelo yakho aya ngqo ekuvikeleni izingane!
© 2021 Izandla--off.org . Kulungile kugodliwe.